Yini okufanele ngiyenze uma wawa ifoni emanzini?
Ubuchwepheshe, Amafoni cell
Njengoba uma asizange uthanda amasu nendlela yakhe amthanda kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi ukunakekelwa ubuqotho bayo kanye nokuphepha, futhi ngokushesha noma izigameko kamuva kwenzeke nhlobo. Futhi uma kuba imodeli okulula ngeselula noma idivayisi, okuyinto vele esingaphezu konyaka, indumalo akukakabi kuqine. Kodwa kuthiwani uma usanda usanda kuthenga idivayisi entsha ngokuphelele, ukuchitha kuso isamba lungisa, futhi ifoni yawela emanzini? A nesimo abantu abaningi, akunjalo? Ubani nje nempela kithi akawuthandi ukulalela umculo kule okugeza? Futhi kungase kwenzeke ukuthi ucingo ezibalulekile okungazelelwe bathole umnikazi smartphone singalindele. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi isimo, siye njengenkulumo, umphumela namanje eyodwa - amasu ezimanzi ngezandla futhi bethukile yezindleko ukukhanda oluzayo emehlweni. Ngakho yini okufanele ibe isinyathelo sokuqala ngqá umnikazi, uma ifoni lehla emanzini? Sethula amalungiselelo main okungase ukudambisa isimo futhi kuvimbele ukuthuthukiswa izinqubo elibhubhisayo iyunithi. Kodwa namanje batusa kakhulu ukuthi uxhumane ochwepheshe. Kuphela umuntu onolwazi ungagcina imishini kusukela Ukubhujiswa kokugcina.
Umakhalekhukhwini yawela emanzini. Yini umnikazi?
Into ebaluleke kakhulu - kungenzeka ukuyikhipha ibhethri ngokushesha bese uzama ome nabo. Uma ngalesi sikhathi akwenziwa ke ematfuba ukuthi ifoni kuyodingeka ukushintsha ngokuphelele, kwandisa kakhulu. Sula lamanzi emzimbeni. Ngomusa, ngaphandle kokwenza noma yimuphi umzamo owengeziwe, embule panel esemuva. Khipha ibhethri kusuka kudivayisi. Shiya ifoni yakho usesimweni zezikhali mayelana ebusuku. Ngaphansi buyela yakhe pre ethambile, indwangu umswakama ukugeleza samanzi singenalo buthelela ngaphansi lisebenze. Ifoni ngokwayo Kuhle ukungayidli ugaxe isihenqo phansi, futhi kungokufanayo nangendoda - up battery angenalutho slot. Kungenjalo, uketshezi kungenzeka ukungena ngokujulile futhi kulimaze hhayi kuphela esikrinini, kodwa futhi "yangaphakathi", ezingemnandi nakakhulu.
Isexwayiso! Akunakusetshenziswa ungafaki yedivayisi ibhethri noma enye idivayisi bafudumale. Lokhu ngeke kuphela ukusiza ifoni, kodwa futhi zaba zimbi isimo, njengoba ukushisa ungakulimaza izingxenye ezintekenteke ngaphakathi emshinini.
Ngemva wawa ifoni emanzini, futhi uke wasebenzisa iseluleko ngenhla yomiswa ke, kungaba kuhle ukuvikela oxhumana nabo kusuka namachibi. Kungenjalo kungase kwenzeke ukuze ishaja ngeke kubhekwe, headphones musa ukuxhuma, futhi iyunithi ngeke isikhathi eside ngaphandle ekugcineni buyisela zonke lezi zinto. ukulungiswa okunjalo izobiza umnikazi ayengeve ifoni. Moisten a swab ukotini ngotshwala futhi ngobumnene, ukuqikelela ukuthi uthinte bese Akunamatheli izikhonkwane zensimbi nezinyawo, Sula ingaphakathi ekhosombeni. Akufanele ukukwenza ngamafutha noma ezinye izindlela amafutha. Utshwala kuvimbela izinqubo namachibi, kanti bonke abanye ungenza umonakalo.
Uma ifoni lehla emanzini, kubalulekile ukuba ngokushesha sinake khona amanzi ngaphansi ingilazi kwesikrini. Uma kukhona ukwehla okuqaphelekayo, khona-ke kuhamba phambili ukususa phezulu kwephaneli futhi ngokucophelela ususe ketshezi nge swab ukotini. Noma, ungathatha ubungozi bokulahlekelwa unaphakade isibonisi. ebucayi ikakhulu ogelezayo nokumanzisa ezibizayo zokuthinta. Uma ifoni lehla emanzini, futhi sibonise sihlobana capacitor uchungechunge (esabela kuphela uthinte ngeminwe angenalutho), kuba inketho okubi kakhulu. Kulokhu, ukuthatha ingxenye yaleli ukunakwa ngangokunokwenzeka.
Ekugcineni, ukuqeda amanzi "mhlabeni kwangaphakathi" we okhulumisana kusiza okugeza ultrasonic. idivayisi okunjalo, njengoba umthetho e workshop ezikhethekile. Ngalo wasusa zonke izinhlayiya ngomzuzu umswakama, kanye steel "ukugcwalisa" kungaqali ukuba oxidize nokugqwala. Ngakho manje, uma ifoni yakho lehla emanzini, uyazi ukuthi ukwenza. Inhlanhla futhi qaphela ne inqubo.
Smartphone Lenovo k3 Qaphela: i Uhlolojikelele, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Indlela ukukhubaza wonke amasevisi Beeline: ngezindlela eziningana
Ukuvela amafoni ezithombeni
Yekuchumana sendlela uqaqe HTC One X
Futhi niyazi ukuthi ukushintshela ifoni yakho ukuze ithoni imodi?
Kanjani ukuze uthumele amafayela kusuka efonini yakho kuya efonini: amathiphu namasu
Amathayili aphansi: ubuchwepheshe bokuhlangana. Ubuchwepheshe bokufakwa kwezibhamu ezithambile "Shinglas", "Tegola", "Doke"
Yini odinga ukukwazi ngaphambi ugcwalisa tattoo?
Victoria Nuland - ukuthi siyazi ngayo?
Indlela hlola high voltage izintambo ezithile kuhlanganise nemoto?
I-matrix ye-LED: incazelo, uhlelo lokusebenza
Indlela yokuqala inikela ngemali ukuze lokuzalwa, isipho okufanele akhunjulwe ngayo?
"1c Payroll" - Usizo ezimali kanye nokuphathwa kwabasebenzi emnyangweni.
Indlela ukususa Windows: ukulungiselela kabusha ukufakwa
Iholide Warm-Alexis. Izimpawu for the holiday Warm Alexei
Parachute intambo namasongo - ubucwebe imvunulo izici ewusizo
Okuthiwa Elizabeth Meaning